XAQ Ayuu Ku Dagaallamay!! - Maguire Oo Xorriyadiisii Dib U Helay, Laaluushkii Uu Isku Dayay Inuu Bixiyo & Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu U Dagaallamay - Gool24.Net
XAQ Ayuu Ku Dagaallamay!! – Maguire Oo Xorriyadiisii Dib U Helay, Laaluushkii Uu Isku Dayay Inuu Bixiyo & Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu U Dagaallamay
August 22, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa goor dhawayd la arkay isaga oo kasoo baxaya maxkamada uu wajahay kaddib markii shalay la xidhay iyadoo loo haystay fal dagaal iyo qalalaase ah oo uu sameeyay.
Sida lagu helay warbixin hore, qaar kamida jamaahiirta kooxaha kale ayaa ku qayliyay Maguire isaga oo jooga baar ku yaala magaalada Mykonos iyagoo af-lagaadaynayay kooxda uu u ciyaaro ee Man United.
Warbixin cusub oo laga helay il-wareedka Mykonos Voice ayaa sheegaysa in kaddib af-lagaadada ay jamaahiirtaasi u geysteen Man United ay kaddib gacanta walax af-dhuuban kaga dhufteen Maguire walaashiis Daisy taas oo dhalisay inuu fal-celin xoogan sameeyo.
Sida ay wararku sheegayaan kaddib in la abaaray walaashii oo uu isaguna fal-celiyay, Maguire ayaa la dagaalamay mid kamida saraakiisha boolis ee goobta joogtay iyadoo loo adeegsaday shan askari si dhulka loo dhigo.
Qaybta ugu xiisaha badan ee maada dhalinaysa balse dambiga weyn kusii noqotay Maguire ayaa ah inuu isku dayay inuu laaluusho oo uu lacag iska siiyo askarta meesha joogtay.
27 sano jirkaas iyo laba nin oo kale oo la socday loona arko ciyaaryahano ay asxaab yihiin ayaa lagu soo oogay dambiga ah, weerar gacan ka hadal ah, weerar afka ah iyo isku day inay laaluushaan ciidanka dalka Greece-ka ah.
Maguire iyo asxaabtiisa oo da’ ahaan lagu sheegay 28 sano iyo 29 sano jir ayaa loo wareejiyay jasiirada Syros kahor inta aan maxkamada maanta lahor geyn.
Kaddib markii laga soo daayay jeelka, Harry ayaa diiday inuu ka jawaabo su’aalihii la weydiinayay balse wakiil matalayay ayaa sheegay inuu ugu dambayn xor yahay.